I-South Node eScorpio: Impembelelo kuBuntu kunye noBomi - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana I-South Node eScorpio: Impembelelo kuBuntu kunye noBomi
I-South Node eScorpio: Impembelelo kuBuntu kunye noBomi
I-Node yasemazantsi eScorpio abemi bahlala kuzo zombini iimeko zentlungu kunye ne-ecstasy state. Baqhele ukuqhubela phambili ebomini ngokubandezeleka ke xa kufika ixesha loxolo, banokuqhubeka nokuxhalaba kwaye balindele yonke intlungu, kwakhona.
uthini umqondiso ka-Agasti 24
Kufana nokuba baxhomekeke ekuphenduleni kwe-visceral, ukuze nje amandla abo anganciphi. Ngaphezulu koku, bafuna ukonwaba ngakumbi kunabanye. Ngesi sizathu, aba bemi behlabathi kufuneka bazi ukuba bangaphola njani.
I-Node yaseMzantsi eScorpio ngamafutshane:
Amandla: Inomdla, ngqo, inetalente kwaye inomdla
Imiceli mngeni: Ukuphelelwa lithemba kunye nokufumana izinto
Abantu abadumileyo: UHalle Berry, uBar Rafaeli, uKeira Knightley, uLeBron James, uSteven Tyler
Imihla: Agasti 3, 1947-Jan 26, 1949 Feb 20, 1966-Aug 19, 1967 Sep 12, 1984-Apr 6, 1986 Apr 15, 2003-Dec 26, 2004 Januwari 19, 2022-Julayi 17, 2023.
Ukufumana uluhlu lweemvakalelo
ISouth Node Scorpios zezokuqala ukunceda abo baphele bekwenzakala ngenxa yokuba bethanda ukuziva indlela iadrenaline epompoza ngayo entliziyweni yabo.
Naxa kukho imozulu yesaqhwithi, bahlala phandle engqeleni kwaye bayayonwabela. Ngelixa babazi kakuhle abalinganiswa babantu, bahlala befuna ukumba nzulu xa besazi abantu, kunye nokunxibelelana nezivamvo zabo nokubona ukuba ziziphi na iziyolo abanokuba nazo, hayi iimvakalelo zabo.
Iplanethi elawula iSouth Node eScorpios yiPluto, ekwalawula i-Underworld kwaye imele ukufa, kunye nokuzalwa kwakhona.
Kule ndawo ibekiweyo, uphawu lweScorpio lumele iPhoenix izalwe kwakhona eluthuthwini, ke oko kuchaphazela abemi ngamanye amaxesha ukuba bawukhuphe umoya wabo.
UPluto ulawula ngeyona ndlela inomdla, ngelixa iScorpio imalunga nexabiso ekufuneka lihlawulwe ukuze kufezekiswe amandla.
I-South Node kolu phawu ibonisa ukuba abantu banokuziphilisa kwaye bahlaziye ngcono kunabanye, kodwa nokuba bayamangalisa, bahlala becinga ngeemfihlo zabo, benempindezelo kwaye benento.
Ibonisa indlela abantu abahamba ngayo ukufumana amandla abo, ngendlela enzima. Abantu abane South Node eScorpio bayabazi ubumnyama kunye nezifundo ezingafunekiyo, kunye neentlekele zabantu, ezinokubashiya benamanxeba, nokuba banesibindi ngokwaneleyo sokuya kwelona xesha linzima.
Bayazi ukuba kuthetha ntoni umoya onzima, kananjalo banamaxesha oyiko kwaye babekrokrela.
Eli xesha lokuphila libaluleke kakhulu ukuba bafuna ukucinga kwakhona kwiimpawu zabo kunye nezinto eziphambili kubo, kunye nokuvumela ukuba baphinde bazalwe ngelixa bethanda kwaye befumana uthando lwabanye.
Zininzi izinto ezixabisekileyo ezifunyaniswe kwisithunzi seScorpio kuba lo mqondiso uyaziwa ngokuzisa ubulumko kunye nokuthakazelisa ubugqi.
Njengamaxesha onke ngalo mqondiso, kunokubakho impembelelo yokungathembeki kuba abemi balapho bayazi kakuhle into engalunganga. Le yimpembelelo kubomi babo bangaphambili. Kungenzeka ukuba bebeqwalasele kakhulu iimfuno zabanye abantu kwaye ingezizo ezabo.
Ngaphezulu koku, banokuthatha nje amaxabiso abanye, izixhobo kunye namaqabane kuba awabo abangele iidrama kuphela ebomini babo.
I-South Node Scorpios inamava amaninzi xa kufikwa ekwabelaneni nabanye ngentlungu, kodwa oku akubancedi ngandlela thile.
Bathanda ukugqithisa kwaye bahamba emva kweentsingiselo ezinzulu kuba oku kuyaqhubeka kukhathaza iingqondo zabo. Abakhathazeki ukuba kunye nabo 'balele' kodwa banomdla wokujika onke amatye, de kube kuqinisekiswe ukuba bakufumene kuchanekile.
Xa bengakwazi ukunceda abantu baphilise iintlungu zabo, baya emva kokonwaba.
Ukuba nezinto, banomona kwaye banomona. Bacinga ukuba imicimbi yobuqu ayinangqondo kwaye ngamanye amaxesha banokukholelwa ukuba ngabo kuphela abazi ngcono kunabanye.
Kungenxa yokuba abayithandi nayiphi na idrama, kodwa bayalingwa ukuba bakhathazeke lulo lonke uhlobo lweengxaki. Ngaphezulu koku, abanokhuphiswano kwaye abafuni ukuba yintoni abanye abanayo kuba oku kuya kuthetha kuphela umdlalo weqonga kwaye kubangele ukukhathazeka.
Abemi abazalelwe kwiSouth Node eScorpio bacinga ukuba akufuneki banqwenele oko abanye banako okanye bakhuphisane, singasathethi ke ngokuziphindezela kunokubabangela iintlungu.
capricorn umfazi kunye nokuhambelana kwendoda gemini
Banokuqonda ukuba ukuvelisa kuphela kuyabanceda kwimisebenzi yabo, bengasathethi ke ukuba bafuna ukuhlala ngaphandle kwishishini labanye xa kukho utshintsho olwenzekayo kulwazi. Le kuphela kwendlela abanokuziva ngayo ukuba baphumelele kwaye banelisekile.
Ukubaleka kummandla oyimfihlakalo
Ngeli xesha lobomi, abantu abane-South Node eScorpio kufuneka bazame ukuthanda ngokwahlukileyo kunangaphambili. Ke ngoko, akufuneki babaleke emva kokuziphindezela okanye ngokufumana amandla, ngokunjalo akufuneki banyanzelise ngomdlalo weqonga.
Kuya kuba malunga noxolo kunye nemvisiswano. Kuyafana nakwabo baneNyanga eScorpio.
Umphefumlo wabo kufuneka uthathe ikhefu kuyo yonke idrama ebomini babo. akufuneki bazincame egameni lothando kuba kunokwenzeka ukuba babe nobomi obuswiti bokuthandana kwaye bafumane intuthuzelo, nokuba bazama ntoni na. Yile nto enokubenza ubomi babo buxabiseke.
ISouth Node Scorpios inokuba isebenzise umlingo omninzi ebomini babo. Bahlala bekhangela iisimboli kwaye bafumane iingcebiso koosiyazi, ke kufuneka bazame ukutshintsha indlela yabo encinci kuba ubugqi abunakuba yimpendulo kwezinye iimeko.
umfazi kunye nendoda yindoda
Kubalulekile ukuba bahamba emva kwento abayifunayo ebomini, ukuphepha iimfihlakalo. Ngale ndlela kuphela, banokuphela bethembele kwimo yabo kunye namandla abo okwenza izigqibo.
Aba bemi basemzini bayabaleka kwindawo eyimfihlakalo ngexesha elithile ebomini babo, ukuze bajongane nobukhosi. Xa kunokwenzeka ngakumbi, nabo abaxhomekeki.
Oku akuthethi ukuba abasakwazi ukonwabela iminqweno yabo, kodwa akufuneki bathathe izigqibo ezisekwe kukukhohlisa. I-South Node eScorpio yaziwa ngenkumbulo yeemvakalelo zobuntwana kunye nexesha elidlulileyo lobomi.
Ukuyijonga ngokwembono yokuvela ngokutsha, kubonisa indlela iimvakalelo ezithile ezibachaphazela ngayo abemi beli xesha lobomi.
Iinyani ukusuka ebuntwaneni okanye kwixesha elidlulileyo lobomi alinakukhunjulwa, kodwa iNyanga iqinisekile ukubuyisa iimvakalelo ezithile, ikwanemicimbi engasonjululwanga. Kuyafana nokuvuka kwaye ungazi ukuba kwenzeke ntoni ephupheni.
Ngokuzisa imicimbi yamabali enyanga ukusuka kwixesha elidlulileyo ukuya ezingqondweni nakwangoku, umkhombandlela unokutshintshwa kuba iindlela ezindala ziyaqatshelwa, kunye neemvakalelo ezingasasebenziyo.
Xa kuziwa kubugqi kunye nobumnyama, eyinzalelwane yeSouth Node eScorpio inenkumbulo zokuxhatshazwa egameni lenkolo.
Bayayazi indlela yokoyikisa nabanye kuba banamava ngokusebenza kwengqondo ngokungalunganga kwaye bayazi ukuba bangaphinde babe ngamaxhoba. Ngaphezulu kwabanye, bafuna ukungabinangxaki kuyo nayiphi na imeko yeparanoia.
Banokusebenzisa uloyiko ukulawula abanye abantu, kodwa xa bezama ukungenelela kwinto, banokuzifumana bengakwazi ukuyeka.
Eyona nto ilungileyo kubo kukuba bazole, bazithembe kwaye baphume kwindlela yabanye. Ngokubhekisele kubophelelo, kufuneka babambelele kwimida kuba ukusinda kwabo kuxhomekeke ekunxibelelaneni nabanye kunye nokuzincama ukuze iminqweno yabo ibe yinyani.
Banesidingo esiphantse sokwenyama sokudibana nabanye, kodwa kuphela xa bekhululwa, banokuchuma.
Aba bantu abafuni ukwahlulwa kwimithombo yabo kwaye ukuba kwenzeka oku ngenxa yezizathu abangazaziyo, kungenxa yokuba kukho umntu ongenelele.
Akukho nto ibaluleke kangangexesha elide ukuba bayakuqonda ukuzixhasa kwabo kuphela kwendlela yokuba baziva bazalisekisiwe. I-South Node Scorpios inokuba neenkumbulo zezenzo zolwaphulo-mthetho, kwanokuthuthunjiswa kunye nezithethe ezoyikisayo.
Basenokuba namava okuziphatha okuthile okucekisekayo ngokupheleleyo nokoyikisayo. Ngesi sizathu, bafuna ukuziva yonke into ngokwabo.
Kulula kubo ukuba baqashele oko abantu bafuna ukukwenza, bengasathethi ke ukuba abanakuze babenomdla kubalinganiswa abangaphandle.
Oku kuhle kubo kuba ngale ndlela, bakhuselekile kwaye banokuqonda ukuba kuqhubeka ntoni kwindawo ebangqongileyo. Nangona kunjalo, kuya kufuneka bazame ukuhlala ngaphandle kwamanye amashishini kuba ngale ndlela, banokufumana abahlobo babo abasenyongweni kwaye bonwabele ubomi babo.
Abantu abane South Node yabo eScorpio akufuneki bakhale ngemeko yomntu kuba bayazi ukuba wonke umntu uyakwazi ukwenza izinto ezifanayo, ngendlela abadlala ngayo ubuchule babo bohlukile.
11/27 uphawu lweenkwenkwezi
Akufanele bavumele imicimbi yabo ukuba ihlale engqondweni yabo kwaye babanyamekele ngokulula kangangoko kuba banamava amaninzi.
I-Node yaseNyakatho eTaurus: Umphefumlo oPhezulu
Epreli 29 Imihla yokuzalwa
I-Scorpio ngoJanuwari 2017 i-Horoscope yenyanga
leo man leo woman amava
mercury endlwini 5
ukuhambelana kwe-aries kunye ne-libra yobuhlobo
nguwuphi umqondiso ngoNovemba 4
Disemba 9 ukuhambelana kophawu lwe-zodiac
yintoni umhla we-22 septemba zodiac
yintoni into ye-aquarius